IGALA INDLU. INDLU YOMNTU WASE-ASTURIAN.
El Pradiquín, Principado de Asturias, Spain
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguEmilio
ICasa Grala ikwilali entle eqhelekileyo yaseAsturian ebizwa ngokuba yi-El Pradiquín, kwiBhunga laseMorcin, ecaleni kweAngliru kunye neMontsacro, iincochoyi zasentsomini kumbindi weAsturias.
Yindlu ezimeleyo ebuyiselwe ngokupheleleyo, igcina iindonga zamatye, iiplanga eziveziweyo, i-corridor yomthi kunye ne-terrace enkulu.
Iqulathe imigangatho emibini:
Umgangatho ophantsi unesicwangciso esivulekileyo, kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nazo zonke izinto zasekhitshini eziyimfuneko kunye nezixhobo ezincinci kunye negumbi lokuhlala elinendawo yomlilo.
Kumgangatho wokuqala kukho amagumbi amabini okulala: enye enebhedi ephindwe kabini ye-1.35 cm kunye nelinye igumbi lokulala elineebhedi ezimbini ze-0.90 cm. Kulo mgangatho sikwafumana igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo.
Ukusuka kulo mgangatho kukho ukufikelela ngokuthe ngqo kwi-corridor.
Ngaphandle, indlu ine-terrace enelungelo kunye ne-infinity-terrace enetafile enezitulo, i-ambrella kunye nendawo yokuphumla.
Kukho nendlu yangasese encinci kwisihlomelo kwi-terrace.
ICasa Grala ibekwe kumbindi weAsturias. Ngokupheleleyo ndantywiliselwa indalo Ilali Asturian, indawo efanelekileyo ukuze sinandiphe indalo kwindawo ezolileyo bume nelungelo (imizuzu eli-10 ukusuka Angliru kwaye emazantsi Montsacro), kwaye ngexesha elinye kuba isiqalo ukufumana Asturias (16 Km ukusuka eOviedo
Umbuki zindwendwe ngu- Emilio
Vivo en Oviedo, tengo una gran aficion a la montaña y Asturias me lo ofrece sin lugar a dudas. Tambien me encanta viajar y conocer diferentes culturas y personas.